Kugadzira Kugona - BXL Yakagadzira Packaging
Yakagadzwa muna 1999, BXL Creative ndeimwe yemakambani anotungamira ekugadzira uye ekugadzira makambani muChina.
Musika mukuru: United States, Canada, France, Germany, Italy, South Korea, uye Middle East.
Main maindasitiri: runako, zvizoro / poda, ganda, pefiyumu, kenduru inonhuhwirira, kumba kunhuwirira, kwoumbozha chikafu / chinowedzerwa, waini & mweya, zvishongo, zvigadzirwa zveCBD, nezvimwe.
Mhando dzakasiyana dzechigadzirwa: akadhindwa nemaoko echipo mabhokisi, makemeti mapletti, mabhegi, masirinda, matini, polyester / mabhegi emabhegi, mabhokisi epurasitiki / mabhodhoro, mabhodhoro egirazi / zvirongo. Zvese Nezve Yakagadzirirwa Packaging.
Yekudhinda 4C Yekudhinda Muchina
Chinyorwa cheGerman Heidelberg CD102 chakadhindisa chinowedzera kushanduka kwemidziyo, iine avhareji kuburitswa kwemabhokisi akagadzirwa nemaoko zviuru zana uye mazana maviri emabhokisi emabhokisi pazuva, zvichinyatso kuverengera kurongedza kwekugadzira.
Manroland 7 + 1 Yekudhinda Muchina
Inonyanya kugadzirirwa kugadzirwa kwemhando yepamusoro anodhinda, kunyanya epepa remylar, bepa repepa uye mamwe marudzi epepa rakakosha iro rakaoma kuwana kuita kweruvara rwakakwira. Muchina uyu unovhara zvese.
Kuti uenderere mberi nekuona mhando yechigadzirwa, fekitori yakanyatsogadzirirwa nemashopu asina guruva.
Yekupisa Bvunzo, Kudonhedza Bvunzo, nezvimwewo, kubva pakusarudzwa kwezvinhu kusvika pakugadzirisa kutonga kusvika pakupedza chigadzirwa kuongorora, logistics kuyedza 108 masodhi ekudzora kuona mhando yakanaka yepakeji yega yega.
Fekitori VR Kushanya